FooBillard-plus, fakela lomdlalo webhiliyoni ye-3D ku-Ubuntu | Ubunlog
FooBillard-plus, fakela lomdlalo webhiliyadi ye-3D ku-Ubuntu
UDamien A. | | Imidlalo, Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFooBillard-plus. Imalunga ne umdlalo we-3D OpenGL ophezulu Ngokusekwe kwimithombo yoqobo ye-foobillard 3.0a nguFlorian Berger. Ingadlalwa ngomdlali omnye okanye ababini okanye ngokuchasene nomatshini. Ukuba uthanda ukudlala iibhilidi kwaye ufuna ukuyenza kwiPC yakho, uya kuwuthanda lo mdlalo. Kule migca ilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani ngokusebenzisa i-apt okanye nge-Snap ku-Ubuntu.
FooBillard ixhasa iintlobo ezahlukeneyo zemidlalo yebhiliyadi. Ikwanayo injini ye-physics eyiyo kunye ne-AI ukuyenza ibe mnandi ngakumbi. Inombono okhethiweyo obomvu / oluhlaza we-3D (Ifuna iiglasi ze-anaglyph 3D), Imowudi yokujonga simahla, kunye nokuboniswa oopopayi. Ngumdlalo wamachibi we-OpenGL osekwe kwi-foobillard 3.0a eneepatches kunye neempawu ezintsha (hud, ukutsiba, ukubhaqa ngokuchanekileyo iibhola ezilahlekileyo, isandi ngakumbi kunye nemizobo, njl..)
1 Iimpawu ngokubanzi zeFooBillardplus
2 Faka iFooBillard-plus kwi-Ubuntu usebenzisa i-snap
2.1 Khupha ngaphandle
3 Faka iFooBillardplus nge-APT
3.1 Khipha umdlalo
Iimpawu ngokubanzi zeFooBillardplus
Phakathi kweempawu zomdlalo, sinokufumana ezinye ezinje:
Kule mdlalo Siza kukwazi ukudlala nomdlali omnye, ababini okanye iqela lakho.
Siya kuba nethuba lokuba ukusondeza ngaphakathi nangaphandle, ujikeleze umbono ngamacala ahlukeneyo kunye nokubanakho ukusebenzisa umbono womoya kwitafile yeephuli.
Siza kufumana ziyafumaneka iindlela ezahlukeneyo zomdlalo; Iibhola ezi-8 okanye ezi-9, iSnooker okanye iKarambol.
Siza kukwazi ukukhuphisana nabanye abadlali sisebenzisa i ukhetho lomnyhadala.
Umdlalo uza kusibonisa isindululo sopopayi ngamandla kunye nokuseta okumandla, oza kuyibetha ngayo ibhola ngendlela esinomdla ngayo kakhulu.
Umdlalo uya kusinika Ukudlala umdlalo okwenyani kunye nezandi zebhiliyoni ukongeza umoya. Kumdlalo siya kufumana izandi, umculo, ukutsiba, ulawulo oluphuculweyo, i-hud ephambili kunye nezinye iindlela.
Siza kufumana iindlela ezikhoyo 2D kunye nomdlalo we-3D, kunye nentshukumo elungileyo kuzo zombini iimeko.
Ukuphathwa ngokusisiseko kwe-utf8.
Iimenyu ziphuculwe kwinguqulelo yayo yamva nje, xa kuthelekiswa neenguqulelo ezidlulileyo.
Ibeyi Isantya somdlalo olungiselelwe, Ukulungiselela okungcono kumdlalo.
Entsha Imigca ye-ttf yelayisensi ye-GPL (Ideja Vu)
Ezi zezinye zeempawu esinokuzifumana kumdlalo. Banga funda ngokweenkcukacha iimpawu zeFooBillard-plus kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Faka iFooBillard-plus kwi-Ubuntu usebenzisa i-snap
Ukufakela umdlalo weFooBillard-plus kwi-Ubuntu nge-Snap, Okokuqala kufuneka sixhaswe yile teknoloji ifakwe kwinkqubo yethu. Ukuba awukabinayo okwangoku, sebenzisa isifundo esinokubonwa kuso i-snapcraft ukuqhubeka nokufakwa kwayo ku-Ubuntu.
Nje ukuba inkxaso ye-snap yenziwe, ngoku sinako ukufaka umdlalo weFooBillard-plus usebenzisa i-Snap ngomyalelo omnye. Ukwenza oku, kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye ufake ingxelo ezinzileyo yenkqubo ngokuchwetheza umthetho:
Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna hlaziya inkqubo, ungasebenzisa lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
sudo snap refresh foobillard-plus
Okwangoku, sinako qala umdlalo Ukusuka kwiZicelo / kwiBhodi / kwimenyu yemisebenzi okanye nasiphi na isindululi sokufumana isiqalisi somdlalo. Sinokuvula umdlalo ngokuchwetheza kwi-terminal (Ctrl + Alt + T):
ukuba khipha umdlalo weFoobillard-plus nge-SnapKuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye siphumeze lo myalelo:
sudo snap remove foobillard-plus
Faka iFooBillardplus nge-APT
Ukuba ufuna ukufaka lo mdlalo, ungayenza usebenzisa i-APT. Ngale nto kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctlr + Alt + T) kwaye sisebenzise iskripthi esilandelayo:
sudo apt update; sudo apt install foobillardplus
Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, sinako yazisa umdlalo. Ngale nto kuya kufuneka sijonge isiqalisi kwinkqubo yethu:
ukuba susa lo mdlalo kwinkqubo yethuKwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kuya kufuneka sisebenzise iskripthi esilandelayo:
sudo apt remove foobillardplus; sudo apt autoremove
Abasebenzisi baya kuba nakho fumana ulwazi oluthe kratya malunga nalo mdlalokwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » FooBillard-plus, fakela lomdlalo webhiliyadi ye-3D ku-Ubuntu
IFirefox 78.0.1 ifike ukulungisa i-bug kunye neinjini yokukhangela xa uhlaziya kuhlobo lwangaphambili
UbuntuEd, ulwabiwo olutsha olusikhumbuza uninzi lwe-Edubuntu ephelileyo